Toy izany koa ny headphones an'ny Samsung Galaxy Buds | Androidsis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Fitaovana hafa, Samsung
Ankoatra ny protagonista tena izy amin'ny atoandro atoandro amin'ny endriny rehetra, ny Samsung Galaxy S10, dia nisy fitaovana hafa an'ny orinasa izay nahavita nanangana fanantenana ihany koa. Fakan-tsarimihetsika vaovao an'ny Samsung efa tany anaty dobo izy ireo fa tsy hatramin'ny voalohany. Noho izany dia tsy azo antoka 100% ny hoe afaka hihaona amin'izy ireo isika anio.
Saingy soa ihany, sy ho an'ny mpampiasa marobe izay niandry azy ireo, ny Galaxy Buds vaovao Samsung dia zava-misy ankehitriny. Hetsika roa no vonona hijoro amin'ny AirPods an'ny Apple. Ary ataon'izy ireo amin'ny fahatokisan-tena ho ambony noho ny olona rehetra amin'ny tombontsoany maro.
1 Farany tena safidy hafa amin'ny AirPods
2 Famolavolana sy fitaovana avo lenta
3 Inona no vaovao ao amin'ny Galaxy Buds
4 Resy lahatra ve ianao amin'ny Samsung Galaxy Buds vaovao?
Farany tena safidy hafa amin'ny AirPods
Naneho hevitra matetika izahay tamin'ny fotoana maro izay Ny fakan-tsarimihetsika tsy misy tariby dia tato ho ato izay gadjet tena "ilaina" indrindra. Noho ny tsy fisian'ireo fitaovana marobe ao amin'ny seranan-tsambo 3.5 Jack. Ny fananana headphone tsy misy tariby dia laharam-pahamehana ho an'ny kojakoja maro hafa.
Marina fa ireo izay efa nanana écouteur kalitao dia afaka manohy mampiasa azy ireo noho ireo adaptatera jack USB Type C. Fa amin'ny taha-pivoaran'ny tsena efa taloha ny tariby. Samsung dia manatevin-daharana an'io fironana io amin'ny alàlan'ny fanomezana maodely kalitao misy fiasa ampy tsy hananana sarotra.
Ny Galaxy Buds dia miala famolavolana tena mitandrina mandeha tsara izany raha ny fahitana azy. Na dia afaka miteny aza isika fa toa fitaovana hafa maro izy ireo. Ankasitrahana fa tsy manana "aingam-panahy" izy ireo ny mpifanandrina lehibe hikapoka, ny AirPods. Ny fanomezana vokatra tsy manam-paharoa sy tena izy dia mihasarotra hatrany, ary Samsung dia nanao ezaka hanatanterahana izany.
Ny iray amin'ireo antsipiriany tsy tokony hadino dia ny Galaxy Buds dia hamidy amin'ny vidiny ambany noho ny vidin'ny AirPod ankehitriny. Ny headphones sasany, ny an'ny Apple, izay toa havaozina tsy ho ela, miaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana izay mahazatra antsika. Noho izany, ny vidiny ofisialin'ny kapila finday Samsung dia $ 130, ambanin'ny $ 160 an'ny Apple.
Famolavolana sy fitaovana avo lenta
Mazava izany Samsung dia nandray am-pitandremana fatratra ny kinova vaovao amin'ny findainy tsy misy tariby. Ny filokana matotra voalohany nataony hamoronana headset Bluetooth dia tsy nanana ny fanekena andrasana. Tsy afaka milaza isika fa ny IconX dia headphones "ratsy" amin'ny lafiny rehetra. fa tsy tafavoaka tamin'ny tany mihitsy ny varotra nataon'izy ireo ary nikatona io saika hatramin'ny nanombohany.
Ny fizakan-tena dia iray amin'ireo teboka malemy indrindra an'ny teo alohan'ireo Galaxy Buds. Fa maharitra ny tsunami izay nandratra azy ireo koa ny fampisehoana ireo AirPods. Ankehitriny miaraka amin'ny maodely nohavaozina sy fitaovana tsara kokoa noho ny rehetra, Samsung dia mametraka ny hena rehetra amin'ny hena miaraka amina headphones feno indrindra eny an-tsena.
Manomboka amin'ny manodidina isika fitaovana avo lenta ary ireo famaranana izay mifanaraka amin'ny antenaintsika. Ny safidy ny loko koa toa tena nahomby. Ho hita amin'ny loko mainty, fotsy ary mavo izy ireo. Ny loko fotsy dia toa tsara amin'ity modely finday ity, ary ny fisehoan'ny kavina / charger mavo dia manaitra tokoa.
Ny headphones ny tenany, izay toy ny tamin'ny kinova taloha dia tonga ao amin'ny endrika antsoina hoe intraural, manana mpiaro sy mpanaratsy. Toy ny saika ny zava-drehetra, ny bika aman'endriny dia resaka tsiro. Ny olana asehon'izy ireo matetika dia izany raha tsy lavorary ny fitsa dia tsy ho azontsika ny fampisehoana rehetra azon'izy ireo atolotra.
Mba hahatratrarana tena mety sy hankafizanao ny feo atolotray amin'ny famirapiratany rehetra dia misy koa i Samsung habe telo samihafa amin'ny "robina" izay miditra ao anaty ny sofina mihitsy. Antsipirihany izay afaka mampisy fahasamihafana eo amin'ny traikefan'ny mpampiasa tsara sy ny iray tsy dia tsara.
Inona no vaovao ao amin'ny Galaxy Buds
Headphones an'ny Samsung Galaxy Buds mitondra vaovao mahaliana ho an'ny sehatra. Izy ireo no telefaona finday bluetooth voalohany tonga eo amin'ny tsena amin'ny 2.019. Ary ataon'izy ireo izany amin'ny alàlan'ny fanaovana fanovana amin'ireo izay fantatsika hatreto amin'ny lafiny samihafa. Ny fahitana fa mbola misy toerana hanaovana fanavaozana sy fanatsarana dia antony fankalazana ireo mpampiasa.
Tsara ny fahalalana fa ny Galaxy Buds dia manana ny kinova farany an'ny fifandraisana Bluetooth 5.0. Fenitra mifanentana eo amin'ny fitaovana izay mahatonga ny fifandraisana tsy miovaova sy mitohy amin'ny fotoana rehetra. Tsy vaovao ny Bluetooth 5.0, fa tianay ny misafidy ny farany an'ny Samsung, tohanan'ny valiny mahafa-po sy avo lenta azo ianteherana amin'ny marika madinidinika hafa.
Zava-baovao iray hafa hitantsika ao amin'ny Galaxy Buds ny mety handoa azy ireo tsy misy tariby. Zavatra iray mahaliana kokoa ireo headphone ireo. Ankoatr'izay, aorian'ny fanamafisana ny famandrihana tsy misy tariby amin'ny alàlan'ny Samsung Galaxy S10 vaovao, dia lasa namana tsara izy ireo. Ny fananana famandrihana tsy misy tariby dia mahatonga azy ireo gadget hafa tsy mila tariby.
Ny iray amin'ireo fanatsarana lehibe ny headphones vaovao dia ny androm-piainany. Raha izany dia Ny Galaxy Buds dia manana bateria 58 mAh. Fiampangana manome antoka, hoy ny mpanamboatra, a faharetan'ny fampiasana mihoatra ny 6 ora. Ankoatra izany, miaraka am-pototra 15 minitra fotsiny manolotra antsika adiny iray sy sasany ny fampiasana Extra.
Nihatsara be ihany koa ny velaran'ireny headphone ireny. Tolotra teknolojia mikasika izay ahafahantsika mifandray. Ho fanampin'ny fananana ny bixby mpanampy virtoaly izay hananan'izy ireo koa faharanitan-tsaina.
Resy lahatra ve ianao amin'ny Samsung Galaxy Buds vaovao?
Tianay be izy ireo. Mijery ny fanatsarana ny maodely teo aloha. Hita koa ny vaovao izay mandray anjara amin'ny sehatra toy ny famandrihana tsy misy tariby. Ary ambonin'izany rehetra izany, mahita an'izany ny vidiny fanombohana dia tsy nahazo tanana, ny Galaxy Buds dia afaka nihoatra ny zavatra nataony tamin'ny maodely Icon X.
Raha vantany vao misy izy ireo dia ho hitantsika ny fihetsiky ny tsena. Na dia antsipiriany lehibe aza izany tolotra fandefasana natolotr'i Samsung. rehetra ireo izay manao famandrihana ny Samsung Galaxy S10 vaovao alohan'ny hamarotana azy ireo dia hanana Galaxy Kamboty maimaim-poana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Toy izany ny fakan-tsarimihetsika an'ny Samsung Galaxy Buds
Ny Galaxy S8 dia manomboka manavao ny Android Pie any Eropa